Daar raad raacida Bluetooth | Turn on Bluetooth tracing | Unite against COVID-19
Raad raaca koroonaha | Contact tracing
Daar raad raacida Bluetooth | Turn on Bluetooth tracing
App-ka Raad raacaha NZ COVID waa la cusboonaysiiyay si loogu daro teknoolajiga raad raacida Bluetooth. Raad raaca Bluetooth waxa uu kuu oggolaadaa adiag digniinta haddii aad u dhawayd isticmaalaha App-ka kale ee qaba COVID-19.
Raad raaca Bluetooth looguma talo gelin in loo beddelo nidaamyadayada xidhiidhka jira ee raad raaca ama Raad raaca NZ COVID koodhadhka QR. Weli waxaad u baahan tahay inaad iskaan saarto koodhadhka QR ee halka aad joogtay. Raad raaca Bluetooth waa qalab lagu daray —Waxay caawisaa in la raad raaco dadka aynu u dhawayn.
Sideey u shaqaysaa
Markaad daarto raad raaca Bluetooth, waxay ku shaqaysaa iyaddoo diraysa koodhka Aqoonsiga aan tooska ah ahayn ee gaar iyo amniba ah. Waa sidii telefoonkaaga oo salaan siinta telefoonada kale ee adigu aad u dhowdahay. Qaabka raad raaca Bluetooth waxa uu diiwaaniyaa dhawaanta uu jiray telefoonka kale, iyo inta uu ka fog yahay. Telefoonnada aad xidhiidhkala sameeysay waxay u baahan doonaan inay lahaadaan raad raacida Bluetooth in la daaro siiba.
Tan macnaheedu waxa weeye marka qof laga helo COVID-19, waxay diri karaan wargelin magaca la qarinayo oo ka kooban dhammaan aqoonsiyad aan tooska ahayn la diray 14 maalmood ee la soo dhaafay. Haddii telefoonkaagu aqoonsado wax Aqoonsiyadan ah, oo aad ku dhawayd in ku filan inaad khatar u gasho cudurka, waxaad heli doontaa digniin. Digniintan waxay kugula talin doontaa waxa aad sameeynayso si aad u ilaaliso naftaada iyo qoyskaaga ballaadhan si badbaado ah.
Ka daawo fiidyahayga raad raacida Bluetooth bogan si aad u aragto sida ay u shaqayso (external link)
Sida loo daaro
Badanka telefoonady waxay u cusboonaysiin doonaan App-ka si toos ah. Waxaad sidoo kale dooran kartaa inaad cusboonaysiiso app-kaaga gacan ahaan gudaha kaydkaaga app-ka ama balay istoorka.
Marka aa dhaysatro cubsoonaysiinta, app-kaaga waxa uu ku waydiin doonaa adiga haddii aad doonayso raadraacida Bluuetooth inaad daarto. Markaad tan daarto, way shaqayn doon taa xataa haddii app-kaagu markaa xidhan yahay.
Raad raaca Bluetooth ma isticmaali doono wax dhaato ah, oo ma faaruqin doonto baytarigaaga sababtoo ah waxay isticmaashaa Tamar Yar oo Bluetooth ah.
Gaar ahaanshahaaga waa la ilaaliyaa
Markaad daarto raad raacida Bluetooth, gaar ahaanshahaaga ama sirtaada had iyo jeer way ilaashan tahay — ma wadaagayso goobtaada, magacaaga ama shay kasta oo kale oo adiga kugu saabsan. Raad raaca Bluetooth sidoo kale ma diiwaaniso cida aad xidhiidhka la samayso ama halka aad joogtay.
Tan macnaheedu waxa waaye haddii aad hesho digniin sababtoo ah waxaad xidhiidh la sameeysay qof laga helay COVID-19, cidna laakiin adiga uun baa og inaad heshay. Dhammaan macluumaadka raad raacida aad ku ururiso app-kan waxaa si ammni ah loogu hayaa telefoonkaaga, marwalbana waa doorashadaada waxay tahay macluumaadka aad dooratay inaad wadaagto.